China izixhobo zokwakha i-OTR rim yeGrader China yomvelisi mveliso kunye nabenzi Hywg
Yintoni irim yezixhobo zokwakha?
Izixhobo zokwakha nongqameko lolunye uhlobo lwe Umphetho we-OTRkwaye isetyenziselwa oomatshini bokwakha njenge-backhoe loader, i-grader, i-wheel loader, i-hauler echaziweyo njlnjl. Ngenyanga nganye amashumi amawaka eerim ze-HYWG OTR zonyuselwa kwi-CAT, Volvo, Liebheer kunye ne-XCMG yokulayisha ivili, iigraders kunye neenqanawa.
Zingaphi iindidi zezixhobo zokwakha izixhobo?
Kukho iintlobo ezahlukeneyo ze izixhobo zokwakha udinis, esichazwe sisakhiwo sokwakha izixhobo zangaphezulu kwesiqhelo i-3-PC rim okanye i-5-PC rim, ekwabizwa ngokuba yi-piece-rim okanye isiqwenga ezintlanu, yenziwa ngamaqhekeza ahlukeneyo afana nesiseko se-rim, iringi yokutshixa, iflange, iringi esecaleni kunye isihlalo sobuhlalu.
Ichazwe ngulwakhiwo, izixhobo zokwakha udini inokuhlelwa njengezantsi.
I-5-PC rim, ekwabizwa ngokuba yiziqwenga ezintlanu, yenziwe ngamanqwanqwa amahlanu asisiseko se-rim, iringi yokutshixa, isihlalo sebhedi kunye namakhonkco amabini asecaleni. I-5-PC rim iqhele ukuba nobukhulu be-36.00-25 / 1.5, 13.00-25 / 2.5, 19.50-25 / 2.5, 22.00-25 / 3.0, 24.00-25 / 3.0, 25.00-25 / 3.5, 13.00-33 / 2.5, phezulu ukuya ku-19.50-49 / 4.0. I-5-PC rim inobunzima obunzima, umthwalo onzima kunye nesantya esisezantsi, isetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo zokwakha kunye nezixhobo zokumbiwa kwemigodi, njengee-dozers, ii-wheel loaders ezinkulu, ii-haulers ezichaziweyo, iilori zokulahla inkunkuma kunye nabanye oomatshini bezemigodi.
Zisetyenziselwa ntoni izixhobo zomphetho zokwakha?
Ubungakanani obuthandwayo bezixhobo zokwakha zii-12.00-25 / 1.5, 14.00-25 / 1.5, 17.00-25 / 1.7, 19.50-25 / 2.5, 22.00-25 / 3.0,24.00-25 / 3.0 kunye ne-25.00-25 / 3.5. I-HYWG Umphetho we-OTR inokusetyenziselwa uninzi lwezixhobo zokwakha ezinje:
(1) Umlayishi we-Backhoe
(3) Isilayisha iVili
(4) IsiHauler esiCacisiweyo
14.00-25 / 1.5 3-PC 17.5R25 Ikati ye-140M Umhleli
14.00-25 / 1.5 3-PC 17.5R25 Ityala 521 Ivili encinci yokulayisha
Ngomhla we-17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 Ikati 938K Ivili encinci yokulayisha
Ngomhla we-17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 CAT924H Ivili encinci yokulayisha
Ngomhla we-17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 CAT930K Ivili encinci yokulayisha
Ngomhla we-17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 Ityala 721 Ivili encinci yokulayisha
Ngomhla we-17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 IVolvo L70 / 90 Ivili encinci yokulayisha
Ngomhla we-17.00-25 / 1.7 3-PC 20.5R25 Komatsu WA270 Ivili encinci yokulayisha
19.50-25 / 2.5 I-5-PC 23.5R25 CAT 972 IsiVali seVili esiPhakathi
19.50-25 / 2.5 I-5-PC 23.5R25 Ityala 821 IsiVali seVili esiPhakathi
19.50-25 / 2.5 I-5-PC 23.5R25 IVolvo L110 / 120 IsiVali seVili esiPhakathi
22.00-25 / 3.0 I-5-PC 29.5R25 CAT 966 IsiVali seVili esiPhakathi
22.00-25 / 3.0 I-5-PC 29.5R25 Inkcazo: CAT980 G / H / K / M. IsiVali seVili esiPhakathi
25.00-25 / 3.5 I-5-PC 29.5R25 Komatsu HM 400-3 IsiVali seVili esiPhakathi
25.00-29 / 3.5 I-5-PC 29.5R29 I-CAT 982M IsiXhobo seVili esiKhulu
27.00-29 / 3.0 I-5-PC 33.5R29 IVolvo A60H Isichazi Hauler
Izinto eziluncedo kuthi izixhobo zokwakha?
(1) I-HYWG sisiphelo sendlela ishishini lokuvelisa yonke imveliso.
(2) Sinokubonelela kungekuphela nje ngokungqamana kugqityiwe kodwa kunye nezinto zerim ezinje ngeringi yokutshixa, iringi esecaleni, ii-flanges kunye nezihlalo zobuhlalu.
(3) Sinoluhlu olupheleleyo lweemveliso kubandakanya i-1-PC rim yoshishino, i-forklift rim, i-3-PC rim kunye ne-5-PC rim, sinokubonelela ngazo zonke iintlobo zeerimu ze-OTR.
(4) Umgangatho wethu ungqinwe yi-OEM enkulu njengeCaterpillar, Volvo, Liebherr, John Deere kunye neXCMG.
(5) Ngaphandle kwabathengi be-OEM abangasentla sinokunikezela ngoomatshini abadumileyo be-OTR njengoKomatsu, uHitachi, iDoosan, iBell kunye neJCB.
Imveliso yethu yakutshanje yeRim ye-OTR ngama-36.00-25 / 1.5 eyenzelwe iVolvo A25 / 30 yesicelo somhlaba othambileyo eYurophu.
Senza ukudinwa kunye nokuhlangana kwendibano yeVolvo OE yokulayisha ivili.
Egqithileyo Izinto ze-OTR Rim ubungakanani obahlukileyo ukusuka ku-8 ukuya ku-63 ″
Okulandelayo: Umphetho wokumba umgodi ubungakanani bomenzi we-OEM ukusuka kuma-33 ukuya kuma-63 ″
Izixhobo zokwakha iRim ye-OTR yokuCacisa ...
Izixhobo zokwakha i-OTR isangqa seWheel Loader ...